Idaacadaha Galkacyo oo ka dooday baahinta barnaamijyo khuseeya nabadda. – Radio Daljir
Idaacadaha Galkacyo oo ka dooday baahinta barnaamijyo khuseeya nabadda.
Seteembar 14, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Sept 14 – Kulan ay si wada jira ah u yeesheen agaasimayaasha dhamaman idaacadaha ku yaalla Galkacyo iyo wariyaal madaxbannaan ayaa la iskula soo qaaday baahinta barnaamijyo nabadeed oo ka hadlaya xaaladda magaalada Galkacyo iyo is dhaxgalka bulshada ku nool.
Kulanka oo qaaday muddo saacado ah, ayaa lagu lafo-guray sida ay idaacaduhu qayb uga qaadin-lahaayeen nabadda magaalada Galkacyo iyo is dhax-galka bulshooyinka ku dhaqan, taas oo muhiimad weyn u leh ammaanka magaalada iyo is-fahamka dadyowga deggan.
Dood dheer kadib waxaa la isla meel-dhay baahinta farriimo iyo barnaamijyo ku qotoma nabadda magaalada Galkacyo in si siman looga siidaayo idaacadaha ku yaalla magaalada Galkacyo oo tiradoodu gaarayso 7 idaacadood.
Barnaamijyadaan iyo farriimahaan ku salaysan nabadda magaalada Galkacyo, ayaa hal mar oo quraha soo wada gali doona idaacadaha magaalada Galkacyo maalinkasta, iyadoo idaacadkastabaa ay maalin soo diyaarinayso barnaamijka kadibna ay wada gaarsiin-doono idaacadaha kale si wakhti siman ay hawada u wada galiyaan.
Kulankaasi ay xalay wada yeesheen agaasimayaasha idaacadaha ka howl-gala magaalada Galkacyo ee lagu forfeeyey baahinta barnaamijyo iyo farriimo quseeya nabadda magaalada Galkacyo, ayaa sidoo kale waxaa goob-joog ka ahaa wariyaal madax-bannaan oo haray madax uga soo ahaan jiray idaacadaha gobolka, kuwo u shaqeeya idaacadaha caalamiga ah iyo waliba madax golaha deegaanka u qaabilsan warfaafinta.
Guddi farsamo oo ka kooban 3 xubnood ayaa lagu magacaabay goobta kuwaasi oo qoraal ka samayn-doona dhammaan waxyaabihii xalay laga wada hadlay isla markaana soo jaan-gayn doona xilliga ay sida rasmiga ah u bilaaban-doonaan barnaamijyada iyo farriimaha ku qotoma nabadda magaalada Galkacyo ee loo qorsheeyey in ay ka wada baxaan idaacadaha ku yaalla magaalada.
Agaasimayaashii shirkaasi xalay ka qayb-galay isla markaana go?aamiyey baahinta barnaamijyada nabadda Galkacyo, ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimaha idaacadaha Daljir Galkacyo iyo Buurtinle, C/fitaax Cumar Geeddi, agaasimaha radio Galkacyo Xasan Maxamed Jaamac ?Xasan-Jidka?, agaasimaha idaacadda Xigma Maxamuud Cabdi Yare, agaasimaha idaacadda Iftin Cali Bashi Jimcaale Abti-doon oo sidoo kalana wakiil ka ahaa idaacadda Codka Mudug, Hobyo oo ku yaalla xaafadda Wada-jir ee koonfurta magaalada Galkacyo, waxaana sidoo kale idaacadda Codka nabaddu ay soo wakiilatay agaasimaha Xigma oo isagu fidiyey casumaadda ay iskugu yimaadeen madaxada idaacaduhu.
Dhanka kale kulankaasi waxaa ka qayb-galayey wariyaal madax-bannaan horayan madaxa uga ahaan-jiray qaar ka mid ah idaacadaha ku yaal gobolka, kuwaasi oo kala ahaa Buraan Axmed Daahir oo xilligaan ah xoghaya guud ururka MAAB, iyo Buraan Maxamed Cabdi oo mar agaasime ka ahaan jiray idaacadda Daljir, waxaana sidoo kale shirkaasi ka qayb-galayey wakiilka idaacadda VOA ee gobolka Mudug Maxamed Yaasiin Isaxaaq, iyo Maxamuud C/nuur Aadan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Galkacyo una qaabilsan golahaasi dhanka warfaafinta.
Waa markii ugu horraysay oo mas?uuliyiin idaacaduhu ay yeesheen shir noocaan oo kale oo ay kaga talinayaan aayaha iyo ammaanka magaalada Galkacyo, waxaana ay tani muujinaysaa sida ay warbaahinta gobolku door u siinayso ammaan iyo is dhax-galka bulashada ku dhaqan gobolka Mudug gaar ahaanna kuwa magaalada Galkacyo.
Nuqul heshiiska Galkacyo ee ay kala saxiixdeen Puntland iyo dawlada federaalka ah ee Somaliya.
M/weyne Faroole oo qaabilay wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliya.